यस्तो आयो महुली लघुवित्तको प्रथम त्रैमास विवरण
काठमाण्डौ । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ८३ लाख १२ हजार रपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको सार्वजनिक प्रथम त्रैमास रिपोर्टअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ लाख ३९ हजार रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष संस्थाले ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । पहिलो...
यस्तो छ सानिमा बैंकको पहिलो त्रैमास वित्तीय विवरण; खुद नाफा १४.३२% ले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी रु २६.४७
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.३२ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । पहिलो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ५९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकले ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंको विवरणयोग्य मुनाफा भने २७...
सूर्योदय लघुवित्तको खुद नाफामा १५५% को छलाङ, रिभर्जमा १३३% को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संस्थाको सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा संस्थाले १५५.६९ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो । गत वर्ष संस्थाले ५५ लाख ४५ लाख...
प्रथम त्रैमासमा लक्ष्मी लघुवित्तको खुद नाफा रु. ३.१७ करोड, रिजर्भ ६.४५% ले घट्यो
काठमाण्डौ । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संस्थाको सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा संस्थाले ३६.३७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो । गत वर्ष संस्थाले २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद...
मिर्मिरे लघुवित्तको प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरण सार्वजनिक, खुद नाफामा २६७% को छलाङ
काठमाण्डौ । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६७ प्रतिशतले खुद नाफामा बढोत्तरी गर्न सफल भएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा संस्थाले ५८ लाख १९ हजार खुद नाफा आर्जन...
प्रथम त्रैमासमा आरएमडीसी लघुवित्तको खुद नाफा ७.३५ करोड
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गर्न सफल भएको छ । संस्थाको सार्वजकि प्रथम त्रैमास विवरणअनुसार यो खुद आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ लाख...
प्रथम त्रैमासमै ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको लोभलाग्दो प्रगति, खुद नाफामा ३३९% को छलाङ
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गर्न सफल भएको छ । संस्थाको सार्वजकि प्रथम त्रैमास विवरणअनुसार यो खुद आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३९ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष संस्थाको खुद आम्दानी ७६ लाख १९ हजार रुपैयाँमात्र थियो । समीक्षा...
सिटिजन्स बैंकको प्रथम त्रैमास रिपोर्ट सार्वजनिक, खुद नाफा रु. ३४.९१ करोड
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकको प्रकाशित प्रथम त्रैमास विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ८ करोड रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो वर्ष ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बैंकले खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा...
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा रु. १.३९ करोडले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचकमा पनि प्रगति
काठमाण्डौ । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मुनाफा गर्न सफल भएको छ । बैंकले पहिलो त्रैमास विवरणअनुसार यो मुनाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० लाख रुपैयाँले बढी हो । सोही अवधिमा गत वर्ष बैंकले १ करोड १९ लाख रुपैयाँ मुनाफा गर्न सफल भएको थियो । बैंकले पहिलो त्रैमासमा १ करोड...